Sunday October 14, 2018 - 08:45:19 in Maqaallo by Radio Maanta
Galabnimo sabati ah 14 octobar sanadkii hore ee 2017 goor casir liiq ah dadakuna ay kasoo ruqansayeen howl maalmeedkooda hadi ay ahan laheyd goobahooda shaqo iyo mid waxbarasho.
Gaari xamuul ahaa oo maadooyinka qarxa lagasoo buuxiyay isla markaana uu waday ruux naftii haliga ahaa ayaa isku qarxiyay isgooska zoobe ee magaalada muqdisho oo ah isgoos halbole u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka.
Qaraxaa ayaa lagu tilmaamamay kii ugu weynaa uguna saameenta iyo qasaaraha badnaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho iyo guud ahaan somaliya..
Kolka uu qaraxa uu dhacayay isgoosku waxaa uu ahaa mid saxmad iyo mashquul badnaa maadaaama ay aheed xili galab ah oo dadkana intooda badan ay kusii jeedeen guryahooda.
Qaraaxsi waxaa ku nafwaayay inka badan 642 ruux halka dad kabadan ilaa kun 1000 ruux ay ku dhawacmeen ,
Marka laga sootago dadka dhintay iyo dhaawacmay wxaa jira dadyoow kale oo nolol iyo geeri toon lagu la,ayahy ila iyo xiligan qoosaskooduna ay ka samreen waayo may helin ruuxa iyo raqqa dadkooda, waxa kalo jira dad ku wayay miirkoodii jogta xooga laheyd iyo masahqada ka dhalatay goobta oo ilaa iyo imanka dhimirka la,a.
Xiligas DFS waxay bixisay dadaalo loogu gurmaday dadki waxyeelada aykasoo gaartay mashaqadii zoobe.
Wazaarda maareenta musiibooyinka EE XFS aya sameesay dadaalo wax ku ool ahaa ayadona baadi goob ku sameenesay dadkii lagu waayay musiibadii zoobe,
Kaalintii maamulka Gbanaadir
Maamulkii gobolka banaadir oo uu waqtigaa majaraha uu u hayay taabit cabdi maxamed ayaa ka qeeb ahaa dadaaladii lagu samatabixinayay dadki ku waxyeeloobay musiibadii zoobe
Ayadoona mas,uuliyiinta ugu satresa dalka iyo kan gobolka ay dhiig ugu deeqen dadkii ku dhawacmay qraaxi oo isbitalda magalada muqdisho la geeyay
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah kaga jawaabay masiibadii qaraxii ZOOBE ee magaalada Muqdisho, kaasi oo dad badan ay ku dhinteen.
Dad badan oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyo dibadiisa ayaa sameeyay taageero isku gurmasho isku mid ah, oo ay kaga jawaabeen dadka waxyeelada kala duwan ay kasoo gaartay qaraxii ZOOBE.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa aad uga xumaaday waxii dhacay 14 October, waxaana ay muujinayaan guux arimahaasi la xiriira. Mudo hal isbuuc ah ayaa waxaa magalada muqdisho iyo qaar kamida gobolada dalka waxaa ka socday banana baxyo loogu baroordiiqaye dadkii ku wax yeelebay masiibadii zoobe iyadoo dadka banaanbaxe xiligaasi ay astaan ahaan uwateen maryo gaduudan oo ka turjumeysay dhiiga datay
Dhalin yaradda soomaaliyeed aya kaalin lexaad leh ka qaatay ugur mashada dadkii ku waxyeeloobay qaraaxasi ayadona la arkayay dhalinyaro mtadawiciiin ah oo dhiigooda u shubayay dhawacyadii jiifay isbitalada muqdisho
Kaalintii beesha caalamka
Gurmad badan ayaa dhacay, dowladda federaalka ah waxa ay dhaawacyo badan u qaaday dibadda, waxaa ay caawinaad ka heshay dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Imaaraadkaadka, Itoobiya, Kenya, suudaan Djibouti, Qatar, Midowga Yurub iyo Mareykanka,
Sidokale wadamada beesha caalmaka ayaa muujiyay in ay dowlada somaliya la qeebnasyaan xanunka iyo murugada waxay ayna ka tacsiyadeeyeen dakii kuu geeriyoodey qaraxii 14 octor ee isgooska zoobe ka dhacy.
Wadamada kanada iyo faransiiska aya ka mid ahaa wadamadii xiligaas muujiyay kaalin lixaad leh eeku aadaneeyd dhacdadii 14 octobar ayagoona uga qeeb qaatay daminta taaloyinka Toronto iyo paaris.
Kaalintti dowalad Goboleedyada
Waxaa xiligas gurmadka ka qeeb qaaty qaar kamid ah maamul goboledyada dalka oo lacago iyo agab caafimaad gaarsiyay dadkii ku dhawacmay qaraxii 14 oc ee isgooska zoobe, Sida Putland, Galmudug, jubbaland iyo Maamulka Koonfur Galbeed.
Waqtigaa abwaano fara badan oo soomali ah ayaa ku mujiyay dareenkooda gabayo heeso sida ay ugu xumaadeen qaraxii dadka badan ay ku waxayeeloobeen.
Waqtigan oo ay kazoo wareegaty mudo sanad ah dhacdadii qaraxii zoobe ayaa waxaa loo sameyay taalo lagu muujinayo xasuustii aan mamanka ka go,in ee 14 octobar.